Kurumbidza Mwari nekuda kwezvinhu zvinoshamisa zvakasikwa
Nyika icharamba iripo nekusingaperi (5)
Waini nechingwa zvekuti vanhu vadye nekunwa (15)
“Mabasa enyu akawanda chaizvo!” (24)
‘Kana simba reupenyu rikabviswa, zvinofa’ (29)
104 Regai ndirumbidze* Jehovha.+ Haiwa Jehovha Mwari wangu, muri mukuru kwazvo.+ Makapfeka ukuru* nekubwinya.+ 2 Makaputirwa nechiedza+ sekunge makaputirwa nechipfeko;Munotambanudza matenga sejira retende.+ 3 Anomisa matanda edzimba dzake dzepamusoro mumvura iri kumusoro,+Achiita kuti makore ave ngoro yake,+Achifamba ari pamapapiro emhepo.+ 4 Anoita kuti ngirozi dzake dzive nesimba,*Vashumiri vake vave moto unoparadza.+ 5 Akamisa nyika panheyo dzayo;+Haizombobviswi panzvimbo payo* nariini nariini.+ 6 Makaifukidza nemvura yakadzika sekunge yakafukidzwa nechipfeko.+ Mvura yakamira pamusoro pemakomo. 7 Pamakaituka yakatiza;+Pakanzwika kutinhira kwenyu, yakavhunduka ikatiza, 8 Makomo achikwira+ uye mapani achidzika,Iyo ichienda kunzvimbo yamakaigadzirira. 9 Makaisa muganhu waisingafaniri kupfuura,+Kuti isazofukidza nyika zvakare. 10 Anotuma zvitubu mumipata;Zvinoyerera nepakati pemakomo. 11 Zvinopa mhuka dzese dzemusango mvura;Madhongi emusango anopedza nyota yawo. 12 Shiri dzedenga dzinogara pamusoro pazvo;Dzinoimba dziri mumashizha emiti akasvibira. 13 Iye anodiridza makomo ari mudzimba dzake dzepamusoro.+ Nyika inogutswa nezvibereko zvemabasa enyu.+ 14 Anomeresera mombe uswaUye miti yekuti vanhu vashandise,+Kuti varime zvekudya panyika 15 Newaini inoita kuti mwoyo wemunhu ufare,+Mafuta anopenyesa chiso,Nechingwa chinosimbisa mwoyo wemunhu.+ 16 Miti yaJehovha inogutswa,Misidhari yekuRebhanoni yaakadyara, 17 Munovakira shiri matendere. Imba yeshuramurove+ iri mumiti yemijunipa. 18 Makomo marefu ndeembudzi dzemumakomo;+Mabwe inzvimbo yekupotera yembira.+ 19 Akaita kuti mwedzi utare nguva;Zuva rinonyatsoziva nguva yaro yekuvira.+ 20 Munounza rima kwobva kwasviba,+Mhuka dzese dzemusango dzotanga kufamba-famba. 21 Shumba dzine simba* dzinodzvova dzichitsvaga nyama+Uye dzinotsvaga zvekudya zvadzo kuna Mwari.+ 22 Zuva parinobuda,Dzinodzokera dzonorara mumapako adzo. 23 Munhu anoenda kubasa kwake,Uye anoshanda kusvikira manheru. 24 Haiwa Jehovha, mabasa enyu akawanda chaizvo!+ Makaaita ese neuchenjeri.+ Nyika yakazara nezvinhu zvamakaita. 25 Kune gungwa, iro rakakura uye rakafara kwazvo,Rakazara nezvinhu zvipenyu zvisingaverengeki, zvikuru nezvidiki.+ 26 Ngarava dzinofamba imomo,Uye Revhiatani,*+ yamakasika kuti itambire imomo. 27 Zvese zvinokumiriraiKuti muzvipe zvekudya zvazvo mumwaka wazvo.+ 28 Zvinounganidza zvamunozvipa.+ Pamunovhura ruoko rwenyu, zvinogutswa nezvinhu zvakanaka.+ 29 Pamunovanza chiso chenyu, zvinonetseka. Kana mukabvisa simba razvo reupenyu,* zvinofa, zvodzokera kuguruva.+ 30 Mukatuma mweya wenyu, izvo zvinosikwa,+Uye munoita kuti pasi pave patsva zvakare. 31 Kubwinya kwaJehovha kucharamba kuripo nekusingaperi. Jehovha achafarira mabasa ake.+ 32 Anotarisa nyika, yodedera;Anobata makomo, opfungaira.+ 33 Ndichaimbira Jehovha+ upenyu hwangu hwese;Ndichaimba ndichirumbidza Mwari wangu* chero bedzi ndiri mupenyu.+ 34 Zvandinofunga ngazvimufadze.* Ini ndichafara muna Jehovha. 35 Vatadzi vachanyangarika panyika,Uye vakaipa vachange vasisipo.+ Regai ndirumbidze* Jehovha. Rumbidzai Jah!*
^ Kana kuti “Mweya wangu ngaurumbidze.”
^ Kana kuti “kukudzwa.”
^ Kana kuti “dzive mweya ine simba.”
^ Kana kuti “Haizombozununguswi.”
^ Kana kuti “Shumba dzava nezenze.”
^ Kana kuti “mweya wazvo.” Shoko racho rechiHebheru nderekuti ru′ach. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “Ndicharidzira Mwari wangu rwiyo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Kufungisisa kwangu nezvake ngakuve kunofadza.”